Niobium Carbide upfu, NbC - Goodao Technology Co, Ltd.
multi-phase ceramics ndeimwe yezvinhu zvakagadzirwa zvemazhinji-chikamu zvedongo zvigadzirwa. Iyo yakawanda-chikamu zvedongo zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinowanzo kuve zvakakura mukuomarara, yakakwira yekunyungudusa poindi, yakanakisa makemikari kugadzikana uye kuitisa musoro Iyo inoshandiswa mune inopfeka-isingagadzirike zvikamu, maturusi ekucheka uye maelektrode
Chemical equation: Nbcnt: 3500. C
Nzvimbo yekubikira: 4300. C
Kuwandisa: 7. 6g / ml pa25 "C (iyo)
Fomu: ferrous simbi hupfuKushandisa muzvinhu zvinoumbwa (1) yakawanda-chikamu ceramics ndeimwe yeayaaw zvinhu zvemazhinji-chikamu ceramic zvigadzirwa. Iyo yakawanda-chikamu ceramicmaterial inogadzirwa inowanzo kuvekunyungudika poindi, yakanakisachemical kugadzikana uye kuitisa basa Iyo inoshandiswa mune inopfeka-inodzivirira zvikamu, kucheka maturu uye ma electrode (2) Cemented carbide haigone kungoshandiswa chete ashibitor ye cemented carbide kukura kwezviyo, asi zvakare inogona kugadzira chikamu chechitatu neWC uye Co pamwe chete nemamwe macarbides, ayo anonyanya kugadzirisa hushoma hwekuoma uye kupisa kupisa kwe cementedcarbide Impact, kupisa uye kumanikidza kuramba. Sezvo niobium carbide ine zvayakanakira yekuvandudza kuomarara kwesimbi uye nekuvandudza kuputsika kweiyo alloy, inogona kushandiswa kugadzirira cemented carbide toolmaterials ine yakanakisa yekucheka mashandiro. 3) Iyo yakaoma niobium carbidehard chikamu cheiyo iri pamusoro electrode inopinda muchigadzirwa cheye surfacinglayer, kuitira kuti iyo yekutenderera denderedzwa ine iri nani yekupfeka-isingagadzirise mafupa, uye kupfeka kupfeka kunovandudzwa zvakanyanya. Iyo yekupokana nemishonga chiwanikwa cheiyi electrodewelding iri 1.2-1.8 zvakapetwa kupfuura iyo yakadzimwa 45 simbi (HRC50) uye 2.43.6 zvakapetwa kupfuura iyo Fe-cr-cb yekupfeka-inoshingirira chiwanikwa. Panguva imwecheteyo, iyo yekupfeka-isingagadziriswe yekumusoro hairevi kupisa kana uchipisa .and inogona kuve ichionekwa pamusoro peiyo workpiece. Makatsemuka madiki akagadzirwa pamusoro anogona kuburitsa kushushikana kwenzvimbo yekutarisa uye haizopararira mune zvepasi zvinhu. d Simbi inosimbisa chikamu Kuwedzera asmall huwandu hweiobium carbide mune yekugadzira simbi inogona kuzadzikisa kunaya kwekusimbisa nekusimbisa sekristaro kusimbisa, nokudaro zvichivandudza iyo yakazara michina zvivakwa zvesimbi. (4) Aerospacecomponents anoshandiswa semakemikari mabhuku ekugadzirisa manyaerospace equipme
Niobium carbide ndeyegirini cubic kristaro ine esimbi kubwinya uye ndeye sodium chloride cubic crystal system.
Hukama hwehukama 8.47, lattice inogara A = 0.447nm,
Nzvimbo yakanyunguduka ndeye 3500 ℃. Microhardness> 23.5 Gpa (> 2400 kg / mm2), yakaoma kupfuura corundum. 338000 N / yaive elastic modulus, yekupisa yekuwedzera coefficient ye665 * 10 ^ (6) / K, iyo yekupisa conductivity ye14 w / (m K), inogadzira kupisa - 140.7 kJ / mol, yakatarwa kupisa huwandu hwe36.8 J / (mol · K), iyo resistivity ye 35 mu Ω · cm.
Insoluble mune inopisa uye inotonhora hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, inogadziriswa mune inopisa hydrofluoric acid uye nitric acid yakasanganiswa mhinduro. Muchitevere pa 1000 ~ 1100 ℃ uye nekukurumidza oxidized kune niobium pentoxide pamusoro 1100 ℃. Niobium carbide iri nyore kusanganiswa mu titanium carbide, zirconium carbide, tungsten carbide uye mamwe macomputer, uye pamwe chete kugadzira homogeneous solid solution musanganiswa. Nzvimbo yakanyunguduka: 3500 ℃, kuwanda: 7.6g / cm (25 ℃) shandisa
Sekuwedzera kwe carbide yakaoma chiwanikwa, icho chikamu che ternary uye quaternary carbide yakasimba mhinduro, senge WC-NBC-C ternary system. Zvakare inogona kugadzira yepepuru yekugadzira gem.
Polycarbides yakavakirwa pairi, senge NBC-WC-C ternary masisitimu, inogona kushandiswa seyeyezzle lining zvinhu zveaerospace kunyorera
Niobium carbide (NbC) yakasvibirira cubic kristaro ine esimbi kubwinya uye ndeye sodium chloride cubic crystal system. Iyo mhando yepamusoro yekunyungudika poindi, yakanyanya kuomarara zvinhu, inowanzoshandiswa mukutsikirira kwakanyanya tembiricha yezvinhu uye yakaoma chiwanikwa chiwedzero.
Sezvo carbide inowedzera, ndicho chikamu cheternary uye quaternary carbide yakasimba mhinduro, senge WC-NBC-C ternary system. Zvakare inogona kugadzira yepepuru yekugadzira gem.
Niobium carbide ine yakanaka makemikari kugadzikana uye kwakanyanya tembiricha kuita. Insoluble mune inopisa uye inotonhora hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, inogadziriswa mune inopisa hydrofluoric acid uye nitric acid yakasanganiswa mhinduro; Iko kusanganiswa kwakasanganiswa mune titanium carbide, zirconium carbide, tungsten carbide uye mamwe macomputer, uye musanganiswa wakagadzirwa pamwechete. Yakagadzikana pa1000-1100 ℃ uye inokurumidza kusanganiswa kune niobium pentoxide pamusoro pe1100 ℃. Kazhinji, yakazara mumabhodhoro epurasitiki kana mabhegi ealuminium mukati mekatoni.
(2) Chigadzirwa chinoshandiswa: Kushanda muzvinhu zvinoumbwa: - duplex zvedongo: seimwe yezvinhu zvakasvibirira zveduplex zvedongo zvinhu, zvakagadzirwa neiobium carbide duplex zvedongo zvinhu neyakaomarara, yakakwira utsotso, yakanaka kugadzikana kwemakemikari uye magetsi conductivity, kazhinji inoshandiswa muzvikamu zvinopfeka, cemented carbide yekucheka maturusi uye nzvimbo dzemagetsi: kwete chete inogona kushandiswa seyakaomeswa carbide zviyo kukura inhibitor, asi zvakare nemamwe ma carbides akaumbwa kunze kweWC uye Co chechitatu dispersoid, zvakanyanya kugadzirisa carbide inopisa kuomarara uye kupisa kuvhunduka nemishonga kumanikidzwa oxidation nemishonga kugonaNiobium carbide pamwe nekuvandudza kuomarara kwesimbi uye kugadzirisa kutsemuka kuomarara kwesimbi, nezvimwewo, saka inogona kushandiswa kugadzirira kwekucheka mashandiro esamende carbide yekucheka chishandiso zvinhu uye niobium carbide inogona kuitwa mukati yepepuru chakagadzirwa gem - ichioneka electrode, yakasimba niobium carbide yakaoma chikamu muchikamu chakaomarara chesimbi, gadzira iyo weldin g dhaidhi ine mapfupa akanaka ekupfeka, kusakara kunovandudza zvakanyanya kuwonekera kweyekutema electrode yekupfeka-isingagadzirisike chiwanikwa, kupfeka kwayo kuramba kune iyo yakadzimwa 45 # simbi (HRC50) 1.2 1.8 nguva dzakakwirira, kupfuura muFe - Cr - C - B inomhanya -inopfuura 2,4 kusvika ku3,6 nguva yekudzivirira mukuita kwesimbi yekugadzira trace niobium carbide, inogona kuita mhedzisiro yekusimbisa mvura uye kusimbisa zviyo zvakanaka, kuitira kuti ivandudze zvikamu zvemishini yesimbi, zvikamu zveaerospace: zvinoshandiswa turbine rotor blade injini kamwene jeketi jet vane lining uye nyukireya reactor mamiriro uye zvimwe zvakawanda zvekubhururuka zvigadzirwa zvekuchengetedza zvikamu mukushandisa kwemachira zvinhu: - kufa simbi pamusoro pekupfeka: niobi um carbide sesimbi carbides, ine yakanyanya kuomarara kupisa simba uye abrasion kuramba saka yakashandiswa mune simbi inoratidza iyo inogona kugadzirisa kufa kwepasi kupfeka kuramba - simbi basa-chidimbu kupfeka: mune yesimbi matrix inoumba niobium carbide pamusoro peiyo workpiece, ita yayo pamusoro kuomarara kwakawedzera zvakanyanya, inogona kuzadzikisa HV2800 pamusoro, panguva imwe chete, kuvandudza iyo inoshanda tembiricha yeiyo workpiece density uye sangano, kuti iwedzere hupenyu hwayo hwebasa nemakemikari emvura chikamu chekuisa maitiro inogona kuona iyo niobium carbide yekumhara pamusoro pe kukanda simbi pisitoni mhete, kupfeka uye hwaro zvinhu zvakasangana neakasimba; Iyi yekunamatira pisitoni mhete ine yakanaka yekuchengetedza muhomwe chimiro chimiro, uye zvakanakira zvese zviri zviviri kuomarara, zvinogona kuderedzwa zvakanyanya pasina lubrication svikiro uye inotsvedza yekukwesana coefficient kana dhiziri injini mafuta lubrication, kunatsiridza zvikuru kusakara nemishonga, anogona kuderedza kukweshera kurasikirwa Diesel injini panguva imwe chete, kunatsiridza dhiziri injini kuita - imwe niobium carbide unhani: chitundumuseremusere dzakakwirira tembiricha zvinoriumba uchishandisa niobium carbide unhani, zvinogona kuita hupenyu hwaro hwebasa zvakanyanya kuvandudzwa muindasitiri yemagetsi, emagetsi machubhu anopindirana nezvinhu achishandisa ultrafine cobalt ine niobium carbide, kugadzirisa mwero wemwaranzi Kumusoro kweiyo gridIdzikisa tembiricha iri mugridhi uye udzikise iyo grid yekupisa meseji ine zvakakosha, kuti uwedzere hupenyu hwemagetsi machubhu mukushandisa kwesimbi niobium kugadzirwa: iyo nzira isina kunanga yekudzora nzira inoshandiswa kugadzira simbi niobium, kuburitswa kweiobium carbide yakatanga kushandiswa seyakadzora, uye niobium pentoxide inogadzira gobvu yesimbi niobium, yakagadzirirwa kunatsa yakachena simbi niobium yekuwedzera, niobium carbide inogona zvakare kunongedza kudzikisira kuti ibudise simbi yakachena niobium niobium pentoxide.
Pashure: Vanadium Carbide Upfu, VC
Zvadaro: Tantalum carbide upfu, TaC
Niobium Carbide upfu
Niobium Carbide upfu Mafekitori
Niobium Carbide upfu Fekitori
Niobium Carbide powder Mugadziri
Niobium Carbide powder Vagadziri
Niobium Carbide upfu Mutengo
Niobium Carbide powder Zvinyorwa